कर कार्यालय लम्कीको राजस्व संकलनमा झण्डै १४ करोडको वृद्धि
वैशाख १७, कैलाली । करदाता सेवा कार्यालय लम्कीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनामा पौने १४ करोड बढीले राजस्व वृद्धि गरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा रू. १३ करोड ८४ लाख एक हजार बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चालू आवको यस अवधिमा रू. ३९ करोड २० लाख राजस्व संकलन गरेको हो ।
आन्तरिक कारोबारमा बढोत्तरी, करदाताको संख्यामा वृद्धि र कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष संकलन नभएको कर यस वर्ष संकलन भएको कारण प्रगति देखिएको हो ।
आव २०७६/७७ को सो अवधिमा रू. २५ करोड, ३६ लाख, ६७ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनमा प्रगति देखिएको छ’, करदाता सेवा कार्यालय लम्कीका प्रमुख सेतबहादुर शाही भन्छन्, ‘कोरानाका कारण आन्तरिक कारोबारमा बढोत्तरी भएको छ ।
यसका साथै करदाताको संख्यामा वृद्धि र गएको आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण संकलन नभएको कर यस आर्थिक वर्षमा संकलन भएको छ । यसले राजस्व वृद्धिमा सघाएको छ ।’
कार्यालय प्रमुख शाहीकाअनुसार सबैभन्दा बढी आयकर शीर्षकबाट रू. २० करोड ८७ लाख १ हजार राजस्व संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा रू. १२ करोड ९९ लाख १३ हजार राजस्व संकलन हुँदा अन्तःशुल्क शीर्षकमा रू. तीन करोड ६८ लाख २० हजार जम्मा भएको छ ।
उनले भने, ‘करले देश विकासमा सघाउने भएका कारण सबैलाई करको दायरामा आई कर तिर्न अनुरोध गरिरहेका छौँ । यस वर्ष लामो समयसम्म कर नतिरेका नागरिकलाई केही छूट दिएर कर तिर्नसमेत अनुरोध गरेका कारण राजस्व बढेको छ ।’ सरकारले निश्चित वर्षको कर छूट गरेपछि लामो समयदेखि विविध कारणले कर नतिरेका नागरिक करको दायरामा आएका छन् । रासस